Basikety : manangasanga ny fananganana fotodrafitrasa | NewsMada
Basikety : manangasanga ny fananganana fotodrafitrasa
Taorian’ny fahombiazana tamin’ny fifaninanana “Coupe du Président” eo amin’ny taranja basikety, mitohy hatrany ny fanohanan’ny filoham-pirenena ny fanatanjahantena malagasy. Efa manangasanga indray mantsy ny fananganana fotodrafitrasa.
Ho fampivelarana ny tanora eo amin’ny tontolon’ny fanabeazana sy eo amin’ny tontolon’ny fanatanjahantena ary ho fampiroboroboana ny taranja basikety, maro ireo tetikasa kasain’ny federasiona malagasy (FMBB) hotanterahina, manomboka amin’ity taom-pilalaovana 2016 ity. Tsy ho tanteraka anefa izany raha tsy misy ny fiaraha-miombon’antoka amin’ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-miombon’antoka.
Araka izany, taorian’ny fananganana ilay Complexe sportive de Mahajanga, izay tafiditra indrindra amin’ny tetikasan’ny filoham-pirenena, ary koa taorian’ny fiadiana ny “Coupe du Président”, izay notohanan’ny filoham-pirenena hatrany, manangasanga any ny fananganan’ny federasiona malagasin’ny basikety fotodrafitrasa eo amin’ny taranja basikety.
Raha ny vaovao, hisy fotodrafitrasa ara-panatanjahantena, eo amin’ny taranja basikety, sy toeram-pialamboly miaraka amin’ny efitrano famakiam-boky hitsangana, ato ho ato, eto an-dRenivohitra ka eny amin’ny faritry ny 67 ha no voafidy hahazo izany. Tafiditra indrindra amin’ilay tetikasan’ny federasiona miaraka amin’ilay tetikasan’ny filoham-pirenena ihany koa amin’ny fampivelarana sy fitaizana ireo tanora amin’ny alalan’io fotodrafitrasa io. Voalaza mantsy fa efa manomboka ny asam-panatanterahana ny tetikasa amin’izao fotoana izao.
Ankoatra izay, misy ihany koa ireo tetikasa maro hiarahan’ny FMBB amin’ny International Basket Foundation na IBF manomboka amin’ity taona ity hatramin’ny taona 2019. Izany hoe, ho maro izany ireo fotodrafitrasa eo amin’ny taranja basikety ho azon’i Madagasikara ato ho ato.